सल्मान का सर्तहरु यस्ता छन .... – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentसल्मान का सर्तहरु यस्ता छन ….
सल्मान का सर्तहरु यस्ता छन ….
September 22, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Kollywood 0
काठमाडौँ । सलमान खानले ‘रेस–३’मा अभिनय गर्ने समाचार आएको धेरै भयो । तर, उनले सो फिल्मका लागि आफ्ना सर्त बढाउँदै लगेका छन् । सुरुमा उनले सो फिल्मको निर्देशन रेमो डिसुजालाई दिनुपर्ने माग राखे । निर्माताले माग पूरा गरे ।
निर्माताले सो फिल्ममा जोन अब्राहमलाई पनि लिन लागेका थिए । तर, सलमानले जोनलाई फिल्ममा नराख्ने निर्देशन दिए । जोन ‘रेस २’मा थिए । त्यसैले ३ मा पनि दोहो¥याउन लागिएको थियो । जोनलाई नलिने भएपछि मात्रै सलमान रेस ३ खेल्न राजी भएका थिए । उनले सो भूमिकामा सिद्धार्थ मल्होत्रालाई सिफारिस गरेका छन् । नयाँ पत्रकिाले छापेको छ ।
अहिले आएर सलमानले यो फिल्मको ७० प्रतिशत नाफा आफूले पाउनुपर्ने सर्त राखेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । फिल्ममा सलमान खलअभिनयमा रहने बताइएको छ । उनको हिरोइन भने ज्याक्लिन फर्नान्डिस हुनेछिन् । पहिला ज्याक्लिनको ठाउँमा दीपिका पादुकोणको पनि चर्चा चलेको थियो । तर, सलमानले ज्याक्लिनलाई नै लिनुपर्नै दबाब दिएका थिए ।
चर्चित गायक तेजश रेग्मीको दशैँ गीत सार्वजनिक (भिडियो)